China Volar Locking Plate orinasa sy mpanamboatra | Shuangyang
Takelaka fanidiana volar
—— Karazan-doha ablique
Ny implants trauma ho an'ny takelaka fanidiana volar dia rafitra plating feno hamahana karazana lamina isan-karazany. Miaraka amin'ny takelaka miendrika anatomika misy fanohanan'ny zoro voafaritra sy lavaka combi, dia tratra ny fitsaboana ny vaky boribory boribory sy volom-borona.
Ny implant an'ny takelaka fanidiana volar dia mety amin'ny radius volar distal, izay ratra rehetra izay miteraka fisamborana amin'ny tadin'ny distal.
Ampiasaina amin'ny screw3.0 orthopedic locking screw, screw3.0 orthopaedic korteks, mifanentana amina andian-tsarimihetsika fandidiana 3.0 andiana.
Havoana 3 ankavia
Havanana 3 lava
Ny takelaka fanidiana volar amin'ny fitsaboana ny vaky boribory distal misy na tsy misy fampitomboana ny taolana dia tsy misy fiantraikany amin'ny valin'ny radiografika. Ao amin'ny tapaka tapaka, ny fampitomboana taolana fanampiny dia tsy ilaina raha toa ka azo atao ny mampihena ny anatomika intraoperative sy ny fanamafisana raha azo atao.
Nanjary malaza ny fampiasana takelaka fanidiana volar ho an'ny fametahana fandidiana ny tadin'ny radius distal. Na izany aza, komity maromaro mifandraika amin'ity karazana fandidiana ity no voalaza, anisan'izany ny fivakisan'ny tendon. Ny fihoaran'ny tendrontany flexoris longus tendon sy ny extensor pollicis longus tendon mifandraika amin'ny fanamboarana ny vaky radius distal amin'ny takelaka toy izany dia notaterina voalohany tamin'ny taona 19981 sy 2000,2. Ny tranga voalaza fa ny fivakisan'ny floric pollicis longus tendon dia mifandraika amin'ny fampiasana takelaka fanidiana volar ho an'ny vaky boribory distal dia nanomboka tamin'ny 0.3% ka hatramin'ny 12% .3,4 Mba hampihenana ny fisian'ny fiparitahan'ny floric pollicis longus tendon aorian'ny fametahana takelaka volal distal vaky radius, nandinika ny fametrahana ny lovia ny mpanoratra. Ao amin'ny andiana marary manana vaky boribory distal, ny mpanoratra dia nanadihady fironana isan-taona amin'ny isan'ny fahasarotana mifandraika amin'ny fepetra fitsaboana. Ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao dia nanadihady ny trangan'ny fahasarotana aorian'ny fandidiana ny vaky radial distal amin'ny takelaka fanidiana volar.
Nisy tahan'ny fahasarotana 7% amin'ny andiana marary amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny vaky boribory distal voatsabo amin'ny fikolokoloana amin'ny takelaka fanidiana volar. Ny fahasarotana dia nahitana ny aretin'ny tonelina carpal, ny palsy nerveux peripheral, ny digit digit, ary ny vaky tendon. Ny fantsom-paritry ny rano dia mari-pamantarana fandidiana mahasoa amin'ny fametrahana takelaka fanidiana volara. Tsy nisy tranga ny fipoahan'ny floric pollusis longus tendon niseho teo amin'ireo marary 694 satria nandinika tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny implant sy ny tendon.
Ny valiny dia manohana fa ny takelaka fanidiana ny zoro voafaritra dia fitsaboana mahomby amin'ny vaky boribory distal extra-articular tsy mitombina, mamela ny famerenana amin'ny laoniny aorian'ny fandidiana aorina haingana.
Teo aloha: Takelaka fanidiana volar Dorsal
Manaraka: Takelaka fanidiana volara
3.0 4.0 5.0 Sokiro fanidiana
Takelaka fanidiana ny takelaka Tibia posteromedial
Takelaka fanidiana ny latabatra Tibia aoriana